ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ရွှေတိဂုံအသင်းတော် (စင်္ကာပူ) ဓာတ်တော်တိုက်၏ မွန်မြတ်သော နှစ်သစ်မင်္ဂလာ မေတ္တာသင်္ကြန်ရေပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:09 AM
ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်းကလည်း 12-April စင်္ကာပူ Sembawang Park ထဲမှာ သင်္ကြန်ပွဲလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ၊ စတုဒီသာနဲ့ အခြားအစီစဉ်တွေလည်း ပါပါလိမ့်မယ်။
နှစိသစ်မှစ၍ အမြဲတမ်းထာဝရ .. ကိုကိုနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ
မရောက်တာလည်း ကြာပေါ့. နှစ်သစ်မှာ လမင်းကို ထရံပေါက်က ကြည့်ခွင့်ရဖို့ လက်တို့ပါရစေ။
ညီမရေ.. အစ်မလဲ ဓာတ်တော်တိုက်ရောက်တယ်.. မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ.. လင်းလက်ရေ.. အတက်နေ့ ၁၂နာရီမကျော်သေးလို့ ရေလဲလောင်းသွားတယ်... ဗွမ်း.. ဗွမ်း...
လင်းလက်ရေ ညလေးလာသွားတယ်။ လိပ်စာအသစ်လဲ ပေးရင်းပါ။ စီဘောက်စ်ဖြုတ်ထားလို့ ဒီထဲ နှုတ်ဆက်သွားတယ်။
KL ဘယ်တုန်းက လာသွားတာလဲ? သိလိုက်ဘူး...